होम आइसोलेसन बस्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिने ? | पोखरा समाचार
जेठ ९, पोखरा,
गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि अस्पतालको अभावले होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । तर घरमा नै आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूले कस्तो कुरामा ध्यान दिने रु चिकित्सकहरू गम्भीर समस्या देखिएका बाहेक लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षण देखिएकालाई समेत घरमै आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिन्छन् । घरमै बस्दा खाना र सुरक्षाको बारेमा राम्रो ध्यान दिनु आवश्यक रहेको चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
के खाने के नखाने र ?
कोरोनाको समयमा धेरै बिरामीहरूलाई खाने र पिउने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । धेरै खाना बार्नु हुँदैन । तर पौष्टिक खाना खाने र सकेसम्म घर बाहिर बनेको खानेकुराबाट टाढा रहनुपर्ने चिकित्सको सझाव छ । कोभिडको समयमा शरीरका लागि भिटामिन सी र जिंक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । औषधिको साथसाथै यसलाई प्राकृतिक स्रोतबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । जस्तो सुन्तला, निम्बु, अण्डा र केरा प्रशस्त मात्रामा खान चिकित्सककको सल्लाह छ ।
आफुनो दिनचर्या कस्तो बनाउने र ?
चिकित्सकहरुले कोरोना पोजिटिभ एउटा सामान्य लक्षण भएको बताएका छन् । यसमा शरीर थाकेको महसुस हुन्छ। जसका कारण धेरै बिरामीहरू आफ्ना अधिकांश समय ओछ्यानमा सुतेर बिताउने गर्छन् ।
घर क्वारेन्टिनमा नियमित बनाउनुहोस्, बिहान सबेरै उठ्नुहोस् र हल्का व्यायाम गर्नुहोस्, कोठामा हिँडडुल गर्नुहोस् र शरीरलाई फिट राख्नुहोस् । खाजापछि आराम गर्नुहोस्, बेलुका तपाईं हिँड्न वा पुस्तक पढ्न सक्नुहुनेछ । राति १० बजेसम्म सुत्ने प्रयास गर्नुहोस् । पूरा दिनको तालिका मिलाउनुहोस् । यससँग तपाईं आफ्नै लागि समय पाउनुहुनेछ र तपाईंको दिमाग पनि व्यस्त रहनेछ ।
तापक्रम र अक्सिजनको स्तरमा ख्याल
समय समयमा तापक्रम जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । भाइरसले यसको दायरा विस्तार गर्न सक्छ । यदि तपाईंलाई ज्वरो आएको छ भने तुरुन्तै डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । तपाईंको अक्सिजन र नाडीको स्तर जाँच गर्नुहोस् । दिनमा ४÷५ पटक पल्स लेभल जाँच गर्नुहोस् । यदि तपाईंलाई अक्सिजनको स्तर कम हुँदैछ जस्तो लाग्छ भने चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नुहोस् र तुरुन्त अस्पताल जानुहोस् ।
परिवार र आफन्तलाई संक्रमणबाट कसरी जोगाउने र ?
यदि तपाईं घरमा हुनुहुन्छ भने यो कुरा ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं आफैं संक्रमणको दायरामा आउनुहुन्न। त्यसैले यी चीजहरूको विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ ।
—प्रायः तपाईंको कोठाको ढोका बन्द राख्नुहोस् ।
—खाना दिन आउने बेलामा बच्चा र वृद्धहरू भन्दा पनि उमेरदार मान्छेलाई खाना दिन बोलाउनुहोस् ।
—खाना खाइसकेपछि भाँडा माझ्नुहोस् र सरसफाइ गर्नुहोस् ।
—सकेसम्म मान्छेसँग दुरी बनाएर कुरा गर्नुहोस् ।
—अर्को १४ दिनको लागि ३‍९४ जोडी कपडा लिनुहोस् र दराज त्यतिबेलासम्मको लागि बन्द गर्नुहोस् ।
—प्रयोग गरिएको मास्कलाई सेनिटाइज गर्नुहोस् र यसलाई पोलिथिनमा राख्नुहोस् । १४ दिनपछि त्यसलाईसँगै डिस्पोज गर्नुहोस् ।
—कोरोनामुक्त भएपछि पूरै कोठालाई सेनिटाइज गर्नुहोस् । प्रयोग गरिएको तौलिया र अन्य कपडा धुनुहोस् र तिनीहरूलाई घाममा सुकाउनुहोस् ।
—१४ दिनपछि चिकित्सकको सल्लाहमा परिवारका सदस्यलाई भेट्ने र पुरानै दैनिकीमा फर्किन सक्नुहुनेछ। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि बीचबाट पुनस् प्राप्त गर्नुको मतलब तपाईं आराम गर्नुहुन्न ।